के उद्यम आईओटी रिटेल उद्योग जम्पस्टार्टलाई मद्दत गर्दछ? | Martech Zone
Endणदाता हुन् वित्तपोषण बन्द गर्दै पहिले नै एक बिरामी खुदरा उद्योग। ब्लूमबर्गले पनि भविष्यवाणी गरिरहेको छ रिटेल अपोकोलिसिस चाँडै हामी माथि हुन सक्छ। खुद्रा उद्योग नवीनताका लागि भोकाउँदै छ, र कुराको इन्टरनेट केवल बढावा दिन आवश्यक प्रदान गर्न सक्छ।
वास्तवमा, a२% रिटेलरहरू हाल व्यस्त छन् इन्टरप्राइज इन्टरनेट अफ थिंग्स (EIoT) परियोजनाहरू। सबै खुद्रा विक्रेताहरु मध्ये आधा पहिले नै आफ्नो विपणन मा निकटता टेक्नोलोजी समावेश छन्।
EIoT के हो?
आजका उद्यमहरूमा प्रणालीहरूको बढ्दो संख्या र कुरा पहिले नै जडान भइरहेको छ वा प्राकृतिक रूपमा graatatingtowards जडान भइरहेको छ। यी प्रत्येक कुरा सामान्यतया कुनै विशेष प्रकार्यमा विशेषज्ञता प्राप्त हुनेछ, जस्तै। मोबाइल उपकरणहरू, गति सेन्सरहरू, डिजिटल प्रदर्शनहरू। यदि यी कुरा जडित छन् ताकि तिनीहरू मानक तरिकामा जानकारी विस्तार गर्न सक्दछ, यसले व्यवसायलाई केहि सम्मोहक अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
EIoT कसरी रिटेल बिक्री मद्दत गर्दछ?
मोबाइल सतर्कताहरू र डिजिटल सिग्नेज डिस्प्लेहरू इन-स्टोर अनुरूप प्रयासहरूको वितरणको लागि सबैभन्दा उल्लेखित प्रविधिहरू हुन्
Pers 63% खरीदारहरूले वफादारी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्दछन्, र% 57% ले उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी उनीहरूले विश्वास गर्ने ब्रान्डको साथ साझा गर्छन्
% 66% खरीददारहरूले उत्पादन जानकारी प्राप्त गर्न वा विशेष अफरहरूको फाइदा लिन भण्डार Wi-Fi प्रयोग गर्दछ
50०% भन्दा बढी किनमेलकर्ताहरू उनीहरूको प्राथमिकता र खरीद उद्योगको आधारमा जबकि नजिकमा वा खुद्रा विक्रेतामा आधारित अनुकूल प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न इच्छुक छन्
Pers 78% खरीददारहरूले ई-कमर्स र ई-स्टोर अनुभवलाई व्यवसायिक रूपमा महत्वपूर्णको रूपमा एकीकृत गर्ने महत्त्वलाई मूल्या rate्कन गर्छन्
Len०% सहस्राब्दी र उच्च आम्दानी खरीददारहरूले भने कि उनीहरू रिटेल स्टोरहरूबाट अधिक खरीद गर्नेछन् जसले महान मोबाइल इन-स्टोर शपिंग उपकरण प्रस्ताव गर्दछ।
Sign 68% खरीदारहरूले डिजिटल साइनेजको अपीलिंग प्रकृतिको कारण उत्पादनको खरीद गरे
CUBE बाट यस इन्फोग्राफिकले खुद्रा वातावरणमा EIoT जडान भएका चीजहरू र अनुप्रयोगहरूको उदाहरण प्रदान गर्दछ। CUBE एक उपकरण विकसित गरेको छ कि इन-स्टोर संगीत र मेसेजिंग, भिडियो साइनेज, र होल्ड-संगीत बीचको समन्वय र सहकार्य सक्षम गर्दछ।
इन्फोग्राफिकले EIoT का साथै चुनौती, सुरक्षा, गोपनीयता, सम्बोधन, र कम्प्युटि challenges चुनौतिहरू सहितका चुनौतिहरूको पनि विवरण दिन्छ। खुद्रा विक्रेताहरूले यी चुनौतिहरूमा ध्यान दिनै पर्छ किनकि भविष्यमा उनीहरूसँग काम गर्न सही साझेदारहरू छनौट गर्दछन्।
टैग: डिजिटल साइनेजeiotचीजहरूको इन्टरप्राइज इन्टरनेटउद्यम आईओटीकुराको इन्टरनेटiotमोबाइल अलर्टहरूखुद्राखुद्रा apocolypseखुद्रा उद्योगरिटेल आईओटीरिटेलरहरूबाट